(၂၆)နှစ်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ရာသီအစမှတ်တမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ မန်ယူ
28 Aug 2018 . 1:19 PM
ဖိအားတွေရှိနေတဲ့ မန်ယူအသင်းနည်းပြ မော်ရင်ဟို Mourinho ရဲ့ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီကတော့ အခြေအနေ မကောင်းတာကနေ ပိုဆိုးရွားတဲ့ အနေအထားကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့က အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ စပါးအသင်းကို (၃)ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက် (၂၆)နှစ်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး ရာသီအစအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ ရာသီအဖွင့်ပွဲမှာ လက်စတာကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်လည်း ဘရိုက်တန်၊ စပါးတို့ကို ဆက်တိုက်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်လို့ အမည်စတင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂-၉၃ နောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံး ရာသီအစရလဒ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။
စပါးအသင်းနဲ့ပွဲအပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မော်ရင်ဟို ဒေါသပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး သူဟာ ပြိုင်ဘက် (၁၉)သင်းရဲ့ နည်းပြတွေထက် အောင်မြင်မှု ပိုများတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ မီဒီယာတွေကို တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ မော်ရင်ဟိုက “ပွဲရလဒ်က ဘယ်လိုထွက်ပေါ်ခဲ့လဲဆိုတာ ခင်ဗျား(မီဒီယာတစ်ဦး)သိတယ်မလား။ ၃-၀ ဟုတ်ပြီနော်။ (လက် ၃ချောင်းထောင်ပြလျက်) အဲဒီအဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲဆိုတာရော သိလား။ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ(၃)ကြိမ်ကို ဆိုလိုတာကွ။ ကျန်တဲ့ နည်းပြ(၁၉)ယောက်ထက် ငါက ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို အကြိမ်အများဆုံးရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါက (၃)ကြိမ်၊ ကျန်တဲ့သူ အားလုံးက (၂)ကြိမ်ပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ငါ့ကို လေးစားမှုတော့ရှိသင့်တယ် (Rerespect, Respect, Respect)ဆိုပြီး ဒေါသတကြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မန်ယူအသင်းဟာ ၁၉၉၂-၉၃ ရာသီက ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကို (၂-၁)ဂိုး၊ အဲဗာတန်ကို (၀-၃)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အစ်ဆွစ်ခ်ျအသင်းနဲ့ (၁)ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီရာသီတုန်းက မန်ယူအသင်း လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခု စပါးအသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် သမိုင်းတစ်လျှောက် အိမ်ကွင်း ပွဲ(၅၀)မြောက် ရှုံးပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးဇယားမှာ အဆင့်(၁၃)အထိ ကျဆင်းသွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် မော်ရင်ဟိုရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေကလည်း ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်ပေါ်နေသလို ရီးယဲလ်နည်းပြဟောင်း ဇီဒန်း Zidane ကို နည်းပြသစ်ခန့်မယ်ဆိုပြီး ဗြိတိန်မီဒီယာတွေက ဖော်ပြနေကြတယ်။ မော်ရင်ဟိုအနေနဲ့ ၁၉၉၂-၉၃ ရာသီက မန်ယူဂန္ထ၀င်နည်းပြ ဖာဂူဆန် Ferguson စွမ်းဆောင်ခဲ့သလို ရာသီအစပိုင်းမှာ ဆိုးရွားခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ ရလဒ်ကောင်း ပြန်ယူပြီး အမှတ်ပေးဖလားကို ရယူနိုင်မလား ဒါမှမဟုတ် ရာသီကုန်အထိတောင် မခံဘဲ ရာသီဝက်မှာတင် လက်ပြ နှုတ်ဆက်သွားမလားဆိုတာကတော့ . . .
Photo:Sports Illustrated,Evening Standard,bbci.co.uk
(၂၆)နှဈအတှငျး အဆိုးရှားဆုံး ရာသီအစမှတျတမျးကို ပိုငျဆိုငျခဲ့တဲ့ မနျယူ
ဖိအားတှရှေိနတေဲ့ မနျယူအသငျးနညျးပွ မျောရငျဟို Mourinho ရဲ့ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီကတော့ အခွအေနေ မကောငျးတာကနေ ပိုဆိုးရှားတဲ့ အနအေထားကို ရောကျရှိလာခဲ့ပါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့တနင်ျလာနကေ့ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ စပါးအသငျးကို (၃)ဂိုးပွတျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့အတှကျ (၂၆)နှဈအတှငျး အဆိုးရှားဆုံး ရာသီအစအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ မနျယူအသငျးဟာ ရာသီအဖှငျ့ပှဲမှာ လကျစတာကို (၂-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပမေယျ့လညျး ဘရိုကျတနျ၊ စပါးတို့ကို ဆကျတိုကျရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျလို့ အမညျစတငျပွောငျးလဲခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂-၉၃ နောကျပိုငျး အဆိုးရှားဆုံး ရာသီအစရလဒျတှေ ပိုငျဆိုငျခဲ့တာပါ။
စပါးအသငျးနဲ့ပှဲအပွီး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ မျောရငျဟို ဒေါသပေါကျကှဲခဲ့ပွီး သူဟာ ပွိုငျဘကျ (၁၉)သငျးရဲ့ နညျးပွတှထေကျ အောငျမွငျမှု ပိုမြားတဲ့သူဖွဈတယျလို့ မီဒီယာတှကေို တုံ့ပွနျပွောဆိုခဲ့တယျ။ မျောရငျဟိုက “ပှဲရလဒျက ဘယျလိုထှကျပျေါခဲ့လဲဆိုတာ ခငျဗြား(မီဒီယာတဈဦး)သိတယျမလား။ ၃-၀ ဟုတျပွီနျော။ (လကျ ၃ခြောငျးထောငျပွလကျြ) အဲဒီအဓိပ်ပါယျက ဘာလဲဆိုတာရော သိလား။ ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံ(၃)ကွိမျကို ဆိုလိုတာကှ။ ကနျြတဲ့ နညျးပွ(၁၉)ယောကျထကျ ငါက ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို အကွိမျအမြားဆုံးရယူနိုငျခဲ့တယျ။ ငါက (၃)ကွိမျ၊ ကနျြတဲ့သူ အားလုံးက (၂)ကွိမျပဲရှိတယျ။ ဒါကွောငျ့ ငါ့ကို လေးစားမှုတော့ရှိသငျ့တယျ (Rerespect, Respect, Respect)ဆိုပွီး ဒေါသတကွီးတုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။
မနျယူအသငျးဟာ ၁၉၉၂-၉၃ ရာသီက ရှကျဖီးယူနိုကျတကျကို (၂-၁)ဂိုး၊ အဲဗာတနျကို (ဝ-၃)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး အဈဆှဈချြအသငျးနဲ့ (၁)ဂိုးစီ သရကေခြဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီရာသီတုနျးက မနျယူအသငျး လမျးကွောငျးမှနျပျေါ ပွနျရောကျခဲ့ပွီး အမှတျပေးဖလားကို ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အခု စပါးအသငျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ သမိုငျးတဈလြှောကျ အိမျကှငျး ပှဲ(၅၀)မွောကျ ရှုံးပှဲဖွဈခဲ့ပွီး အမှတျပေးဇယားမှာ အဆငျ့(၁၃)အထိ ကဆြငျးသှားပါပွီ။ ဒါကွောငျ့ မျောရငျဟိုရဲ့ အနာဂတျနဲ့ပတျသကျတဲ့ သတငျးတှကေလညျး ကယျြကယျြလောငျလောငျ ထှကျပျေါနသေလို ရီးယဲလျနညျးပွဟောငျး ဇီဒနျး Zidane ကို နညျးပွသဈခနျ့မယျဆိုပွီး ဗွိတိနျမီဒီယာတှကေ ဖျောပွနကွေတယျ။ မျောရငျဟိုအနနေဲ့ ၁၉၉၂-၉၃ ရာသီက မနျယူဂန်ထဝငျနညျးပွ ဖာဂူဆနျ Ferguson စှမျးဆောငျခဲ့သလို ရာသီအစပိုငျးမှာ ဆိုးရှားခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးပှဲတှမှော ရလဒျကောငျး ပွနျယူပွီး အမှတျပေးဖလားကို ရယူနိုငျမလား ဒါမှမဟုတျ ရာသီကုနျအထိတောငျ မခံဘဲ ရာသီဝကျမှာတငျ လကျပွ နှုတျဆကျသှားမလားဆိုတာကတော့ . . .